Umxholo ophathwayo weWordPress
Iselfowuni yeWordPress eneWPtouch Pro
NgoMvulo, Julayi 4, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu abambalwa bagqabaze ngendlela elungileyo ibhlog ebukeka ngayo kwifowuni. Sithetha nje sifumana malunga neepesenti ezintlanu zeendwendwe zethu ezisebenzisa isixhobo esiphathwayo… ama-5% kwi-iPhone kuphela
Kubalulekile ukubonelela ngamava ohlukileyo omsebenzisi ngesixhobo… nokuba kuyasetyenziswa Swayipha Amava okhethekileyo e-iPad- okanye ukusebenzisa WPtouch Pro ngamava eselfowuni e-WordPress kwi-iPhone, i-Droid okanye ezinye izixhobo. Qaphela: iWPtouch Pro ikwaxhasa i-iPad… ayisiyonto ingafaniyo neOneswipe.
Kubaluleke kangakanani ukuba ujongano lweselfowuni onokuthi ubuze? Ngokwethu Uhlalutyo, utyelelo lweselfowuni kunye nethebhulethi lenyuke nge-22.1% ngenyanga ngaphezulu kwenyanga! Ukutyelelwa kwe-iPhone kunyuke nge-32.2% ngenyanga ngaphezulu kwenyanga.
Oku kuyahambelana nokwamkelwa okuhambayo kunye nezibalo zokusetyenziswa kweintanethi. Ukufundwa kwe-imeyile ephathekayo ikwenyuka ... njengokuba kuthengwa… kunye ngaphezulu kwe-50% yabasebenzisi beselfowuni bayothenga kwi-intanethi.
Iinkampani ezininzi zinokungxama ngenxa yokuphucula umxholo wazo ekusetyenzisweni kweselfowuni… kodwa akufuneki. Uninzi lweenkqubo zangoku zokulawulwa komxholo zinakho ukusebenzisa imixholo ekhethekileyo yeselfowuni okanye amaphepha esitayile. WPtouch Pro iindleko kuphela $ 39 kwisiza ngasinye! Ngaba ungathanda ukwandisa inani lakho labakhenkethi nge-22% nge $ 39? Andiqinisekanga ngeenkampani ezininzi kakhulu ezingayiyo.
tags: isoftware yamagamaIgama lefowuniIplagi yefowuni ephathekayowptouchwptouch pro
I-Podcast yethu yokuthengisa iyafumaneka kwiStitcher!
Imidiya yokuncokola-Ukuvala isikhewu